Fancyco akawanikwa muna 2004. kambani yedu yakava yendarama nokutengesa muna Alibaba kwemakore 14. Raiva rinokosha yakachinja 2005 izvo tine fekitari kwedu. Muna 2015 Fancyco vakabudirira akapinda Nigeria uye Uganda pamusika uye akamisa No.1 muchiso pamusoro chinamirwa bepa uye utsanana zvigadzirwa munyika idzi. Zvino tiri nyanzvi chiputiriso uye zvaidhindwa. Mune ramangwana tichaisa kufarira mutengi uye zvinodiwa mumusika pakutanga, kuzvipira kugutsa vatengi 'zvinodiwa uye vachatarisira, uye kupa yepedyo basa kwamuri.
rabhoritari edu ane nyanzvi vaongo- mudonzvo, vimbiso kupa yeGmail.END_STRONG vanokwanisa zvigadzirwa pachishandiswa yemhando yokuedzwa equipments. tsvimbo All akapfuura pakuongororwa National rokuongorora kodzero kana bhizimisi zvinodiwa ongororo. Company mari mamiriyoni mari kutenga yepamusoro QC equipments, kusanganisira vazvinyause Kuyerera Speed ​​chakarurama, Ink Kubonderana chakarurama, American Aglient Gas Chromatogram Instrument, mwando Meter, American X-setsika Spectrophotometer uye zvichingodaro. Izvi mazhinji equipments uye dzakanaka QC ezvinhu inosimbiswa kambani imwe yakachengeteka nzira iri mberi zvigadzirwa utsanzi uye kubudirira.
Chekambani chikuru zvigadzirwa zvinogona rakakamurwa mhando mbiri: ari kugadzirira uye zvaidhindwa (zvinosanganisira: aseptic pasuru, mudzanga pasuru, okushambadza uye digitaalinen zvaidhindwa, etc); mumwe ndiye utsanana uye utsanana chigadzirwa (mutambo, kudzidzisa unokutakwairirai, reza, pasi ikanyanya, napkin, etc)
We vanosimbirira kuti unhu chigadzirwa ndiye makwikwi edu anokosha, kutevera nheyo optimizing vatengi uye utsanzi continuously.to kuva wokutanga-kirasi zvebhizimisi munyika.
Pakazosvika 2016, tine 5 trademarks, 77 utsanzi patents, 4 Provincial Technology R. & D. Centers, akapfuura zvitupa dzakawanda ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000, SGS, etc
Flexo Print System, Rotogravure Print System, Heidelberg Kushaya Print System, David-Standard Lamination System, HL Lamination System, Swiss LF-IV700 / CH Flame chisimbiso System, Renguva Automatic Dia-cheka System, Slitting Machine, Intelligent QC Machine, DH IMAVISION QC, Automatic Apex & Delivery System
boka redu makasimbisa akatsiga uye kwenguva mabhizimisi ukama vatengi kubvira South Asia, Middle kumabvazuva, Africa uye South America. Zvichakadaro 'Toptac' 'OTAC' vanozivikanwa kwave vakanyorwa maererano mutengi hwedu pamusika omunharaunda uye makasimbiswa sangano muPakistan.
Tichakurukura chii unogona kunetsa, kusangana chii ungafanira, Kuti vape unhu mabasa pamwe musoro mutengo kuti akapfuudza zvinotarisirwa wedu kumukudza vatengi. We nokusangana kuvimbika, kuvimbika chivimbo uye kuremekedzwa kunyika zvose zvatinoita basa